UNICEF oo Shaacisay in Somaliland ka Bilaabayso Talaal Cusub oo Cudurka Jadeecada ah lagula dagaalamayo |
UNICEF oo Shaacisay in Somaliland ka Bilaabayso Talaal Cusub oo Cudurka Jadeecada ah lagula dagaalamayo
Hargeysa(GNN) Wakiilka Hay’ada UNICEF ee Somaliland iyo Somaliya Steven Lawerier ayaa Maanta ka Qaybgalay kulan lagu shaacinayey talaal cusub oo lagula dagaalamidoono Cudurka Jadeecada.
Mr. Steven Lawerier oo ka hadlay kulankaasi oo ay goob joog ka ahaayeen Masuuliyiinta Wasaarada Caafimadka ayaa waxa uu masuulkani uu ka hadlay muhiimada uu leeyahay talaalkan cusub ee lagula dagaalamayo cudurka Dabeysha, waxaanu hadal dhiiri galin ah iyo dardaaran siiyey Shaqaalaha wasaarada Caafimadka oo muddo Afar cisho loo tababarayey sidii ay ugu shaqeyn lahayeen talaal cusub oo lagula dagaalamayo cudurka Jadeecada kaasi oo sannadkan Somaliland ay ka hirgalinayaan. Waxaana uu cadeeyay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo Cudurka Jadeecada dhakhtaraduna ay sida ugu haboon uga Hortagaan iyaga oo kaashanaya Xirfada Ay u leeyihiin Caafimaadka.
“Waxaan ku rajo waynahay inaan ku guulaysanay am dawooyin cusub u keenay cudurka jadeecada oo dadka danyarta ahi u Nugul yihiin kaas oo ka bad-baadin kara in ay u dhintaan,awal horena u dhiman jiray geeri laga baaqsan karo,dawadani waa dawo cusub oo oo qofka caafimaadkiisa kor u soo qaadi karta.
intaas waxa uu ku daray.”hadaanu nahay,haay’adda UNICEF waxaanu ku talo jirnaa in ay somaliland markasta caawino oo kaalin muuqata aanu ka qaadano caafimaadka,awal hore waanu tageeri jirnay hada waanu tageeraynaa oo waliba waanu ka sii badin doonaa aniga oo eegayna hadba siday yihiin caafimaadka shacabku,waxaana dawadan gayn doonaan dhamaan meel kasta oo ay ka dhaw dahay goob caafimaad oo bukaan lagu daryeelayo. Mr Steven waxa uu hambaleeyay wasaarada caafimaadka iyo Bahda markasta u taagan caafimaadka bulshada somaliland isaga oo cadeeyay in Kulankani yahay mid lagu barayo sidii dawadan cusub qofka bukaanka ah loogu daryeeli lahaa,waxaana uu sheegay in ay somaliland nasiib u heshay.
Saraakiil ka Socday Haay’adda UNICEF ayaa iyaguna khudbad madasha ka jeediyay kula dardaarmay masuuliyiinta wasaarada Caafimaadka ka Socda ee la doonaya in ay bixiyaan dawadani in ay sida ugu haboon qofka u siiyaan. Sarkaal ka socday wasaarada caafimaadka somaliland Maxamed Cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka wasiirka wasaarada caafimaadka somaliland ayaa madasha hadalo kooban ka jeediyay waxaana uu yidhi.
“Aniga oo ku hadlaya Magaca wasiirka waxaan mahad naq balaadhan u soo jeedinayaa Haay’addaha sida tooska ah ugu lugta leh talaalka,halkana waxa lagu qabanayay tababar soconayay mudo shan cisho ah oo lagu falan qaynayo wax tarka iyo wax qabadka,jadeecada iyo cudurka dabaysha sidii loo cidhib tiri lahaa,. intaas waxa uu ku daray.”madaxii haay’adda UNICEF ayaa inala joogay waana ninkii nasiib wanaaga bilaabay sidii loo cidhi tiri lahaa cudurka booliyada,maanta waxa la taagan yahay sanado ka bacdi cudurka Jadeecada,ololahan Soo Socda ee taleelka waxa lagu cidhib tiri doonaa cudurka jadeecada oo dalka faro baas ku haya,waxaana laga talaali doonaa gobolada somaliland oo dhan. Kulankaasi inta uu Socday masuuliyiinta madasha ka soo qayb galay waxa dhex martay dood dheer oo ku saabsan dawadan cusub ee jadeecada la dagaalamaysa,kuwaas oo afkaar kala duwan isku dhaaf-shanayay madasha.